ikhaya IOORANIA FOOTBALL STORI Ibali leChris Wood yobuntwana kunye neNqaku le-Biold ye-Chris
Igqityelwe ukuvuselelwa kwi Septemba 30, 2019
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGlaus Genius eyaziwayo ngegama lesidlaliso "Woody". Ibali lethu leChris Wood yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukususela ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye nokunyuka kukaChris Wood. IiCredits Zemifanekiso: DailyMail, Ibhola yebhola kunye I-CambridgeFootball
Uhlalutyo lubandakanya ubomi bakhe bokuqala kunye nemvelaphi yosapho, imfundo kunye nokwakha ikhondo lomsebenzi, ubomi bokuqala bomsebenzi, indlela yakhe kwibali lodumo, ukunyuka kwibali lodumo, ubudlelwane, ubomi bomntu, iinyani zosapho kunye nendlela yokuphila.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba ungumdlali ovuthayo onamehlo okujonga amanqaku. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-Biography kaChris Wood enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
Iinyani zeChris Wood zobuntwana kunye neeNqaku ze-Biology ze-Chris Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
Ukuqala, amagama akhe apheleleyo nguChristopher Grant Wood. UChris Wood wazalwa ngomhla we-7th ka-Disemba 1991 kunina uJulie Wood noyise, u-Grant Wood e-Auckland, isixeko esikwiNorth Island yaseNew Zealand. Wazalwa njengomntwana wesibini kunye nonyana wokuqala kumama wakhe ofanelwe ngezantsi.
UChris Wood wazalelwa kwikhaya lamaKristu elineengcambu zomkhosi kunye nenqanaba eliphakathi losapho olukumgangatho ophezulu. Umzukulwana wakhe ofanelwe apha ngasentla wayeligosa lomkhosi elidla umhlala-phantsi ngaphambi kokuba asweleke. Ukhule kunye nodadewabo omdala uChilsey Wood naye njengaye naye waba ngumdlali webhola ophumeleleyo.
Iinyani zeChris Wood zobuntwana kunye neeNqaku ze-Biology ze-Chris Imfundo kunye neBraduer Buildup
Bobabini umntakwethu kunye nodade wethu omkhulu ekhaya baya kuhlala bedlala ngokuchaseneyo. UChris wayekhuthazwe ngabazali bakhe ukuba ajoyine udadewabo kwiMidlalo ye-Onehunga, apho wafunda ukonwabela umdlalo weqela.
Ndinomdla wokufunda ngakumbi, bobabini uChris kunye nodadewabo baqhubela phambili ukuba bafumane imfundo yebhola eWynrs, iAuckland esekwe kwisikolo sasekwa ngu-All White Wynton Rufer. KwakuseWyners uChris Wood waphuhlisa ubuchule bakhe kwaye wayekulungele ukuya kwiimvavanyo zebhola.
Iinyani zeChris Wood zobuntwana kunye neeNqaku ze-Biology ze-Chris Ubomi bokuqala
Ngomhla we-11, usapho lakwa-Wood lwashiya isixeko sase-Newzealand e-Auckland safudukela kwidolophu yaseWaikato kwidolophu yaseCambridge ekumgama we-24 iikhilomitha ezantsi mpuma kweHamilton. Idolophu yakowabo yafudukela “CambridgeYaziwa njenge "Idolophu yeMithi kunye neeNtshatsheli". Xa ndandilapho, uChris nodadewabo bafunda kwiSikolo saseSt.
UChris wayenomdla omkhulu wokuqhubeka nomsebenzi wakhe ukusuka apho wawushiya khona. Umdla wakhe kwibhola ekhatywayo wambona edlula kwizilingo kwaye ebhalisa ukudlala ibhola ekhatywayo kunye neklabhu yasekhaya- iCambridge FC. Apha ngezantsi kukho umfanekiso kaChris omncinci kunye neqela lakhe.
UChris Wood (oboniswe kwicala lasekhohlo komqolo ophakathi) -Iminyaka yakhe yakuqala kunye neCambridge FC Academy.
Ngokutsho Iwebhusayithi yeCambridge FC, Xa uChris Wood wayengu-14, wayesele eyunithi enkulu- kuthetha ukuba uphilile kwaye womelele. Kwiminyaka yobudala, osemncinci wayekulungele ukudlala ibhola ekhatywayo.
Iinyani zeChris Wood zobuntwana kunye neeNqaku ze-Biology ze-Chris Indlela eya kwigama
Emva ngelo xesha, ilungu leCambridge FC uKen Hobern, umhlobo wosapho lakwaWood wayevuya kukwazi ukuba umncinci uza kuba nembonakalo yeqela lakhe lokuqala. Ubusazi?… UKen wathembisa uChris Wood $100 ukuba unokufumana inqaku angayazi injongo yakhe yimizuzu nje embalwa ukusuka kwisibambiso sakhe.
UChris ungene kumdlalo obambeleyo kwaye ibhiyozo yakhe yenjongo emva kokufumana amanqaku kwi-dut yakhe yayiquka ukugcoba ngovuyo kunye. Le mpumelelo yabonwabisa abalandeli kunye nosapho lonke.
Emva kokupela kwiimbangi zalapha ekhaya uHamilton Wanderers kwisizini elandelayo, uChris Wood utsale umdla weqela le-ASB Premiership i-Waikato FC eyamfumana kwi-2007. Kanye njengokuba wayejoyina iklabhu, uWood wabekwa esweni ziiklabhu ezininzi eziphawulekileyo eYurophu ezazicenga ukuba zisayinwe. Emva nje kokudlala imidlalo ye-5 kunye neklabhu, uChris Wood wahluthwa yiklabhu yesiNgesi, eWest Brom.
Iinyani zeChris Wood zobuntwana kunye neeNqaku ze-Biology ze-Chris Ukunyuka Kwigama
UWood wanconyelwa kwiWest Bromwich Albion's Academy ngumqeqeshi uRoger Wilkinson, owamisela ityala elathi laphumelela imibala ebalekayo. Ngelixa kwi-academy, uChris Wood wafumana uhlobo olucekeceke lwefom yokufaka amanqaku kwi-West Brom yolutsha kwi-academy, i-feat eyanyanzela umqeqeshi wayo ukuba ambeke kuluhlu lweminqweno yakhe yeqela eliphezulu
Ngo-Epreli u2009 wenzakala kubadlali abaliqela baseNtshona Brom babone uWood enikwa umnxeba ongxamisekileyo ukuya kwiqela lokuqala le-West Brom. Uphume ebhentshini ukuze abe ye-New Zealander yesihlanu ukuyodlala kwiPremier League. Ngeli xesha eNgilane, ngokuzithoba wasebenza ngokuziqhelanisa nomsebenzi wakhe ngokuya kwimali mboleko, esomelela ngokwamaxesha onyaka kunye nokufumana kangangoko wayenokuba nako kumqeqeshi ngamnye.
Ukukhawuleza phambili kwixesha lokubhala, uWood okwangoku wamkelwe njengomdlali webhola ekhatywayo yebhola eklabhu yaseNgilani, ebhalise ngaphezulu kweenjongo ze-100 kuzo zonke iiklabhu awakhe wadlalela zona. Umbethi we-6 ft 3 okwangusekela-kaphathi-mphathi weBurnley FC ngexesha lokubhala okwangoku unandipha ubudlelwane obukhulu kunye nenkokeli yokomoya yeklabhu. Ashley Barnes.
UChris Wood Rise oya kudumo. Imboleko yeMifanekiso: IPlanethiFootball kunye neDailyStar
Iinyani zeChris Wood zobuntwana kunye neeNqaku ze-Biology ze-Chris Ulwalamano lobomi
Ngokunyuka kwakhe ukuba nodumo, kuyacaca ukuba uninzi lwabathandi bebhola beBurnley kunye neNewzealand kumele ukuba bacinga ukuba ingayintombazana kaChris Wood Girl okanye uWife. Inyaniso mayixelelwe! Akukho nto iphika inyani yokuba imbonakalo yakhe entle ayiyi kumenza athandane nabanye abalandeli bakhe ababhinqileyo.
Nangona kunjalo, ngasemva kwe-Newzealander ephumeleleyo, kukho intombazana ethandekayo emhle ngobuhle bukaKirsty Linnett. Intombi entle kaChris Wood efanekiselwa ngezantsi kunye nendoda yakhe kwivenkile yekofu eAlderley Edge, Cheshire. Bobabini abathandi baqala ukuthandana ngomhla we-14th kaJulayi 2015.
Umfazi ka-Met Chris Wood- Kirsty Linnett. Ityala kwi TheGuardian
Ubusazi?… Intombi entle kaChris Wood ikwangumdlali webhola ekhatywayo. Ngexesha lokubhala, udlalela i-Liverpool kunye ne-England phantsi kwe-23 iqela lehlabathi. Apha ngezantsi kukho umfanekiso kaKirsty Linnett osebenza kunye neklabhu yakhe yeLiverpool, njengoko ethatha umdlali welinye iqela.
UKirsty Linnett osebenzela iLiverpool. Ityala kwi TheGuardian
Bobabini isithandwa kunye nentombazana bayazingcayo ngendlela nganye yomsebenzi. Ngokuka Kirsty… 'Kuya kuba kuhle ukujonga emva xa sele sikhulile kwaye sithi sobabini kufuneka siphile eyethu amaphupha,'
Yintoni uMbini kwisibini esitshatileyo, ukuthandana njengabadlali bebhola abaphambili: Zombini uLinnett noWood, "Ibhola isoloko iza kuqala". Uyavuma ukuba njengesibini, ngamanye amaxesha baba krakra kwintsebenzo yomnye nomnye emva kwemidlalo yabo. Bobabini uLinnett noChris abaze baxambulisane malunga nolawulo olukude njengoko ibhola isoloko ilungile kumabonwakude wabo ekhaya.
Kuyothusa abanye abalandeli ukuba bobabini uWood noLinnett basatshatile njengasexesha lokubhala. Nangona kunjalo, ukugweba ngendlela bobabini bonwabele ubomi babo, ngokuqinisekileyo ukuba umtshato wabo unokuba linyathelo elilandelayo ngokusesikweni.
UChris Wood kunye noKirsty Linnett- Isibini seBhola ekhatywayo
Iinyani zeChris Wood zobuntwana kunye neeNqaku ze-Biology ze-Chris Ubomi bomntu
Ukwazi iinyani zoBomi bukaChris Wood kungakunceda ufumane umfanekiso obalaseleyo ngobuntu bakhe kwisandi sokudlala.
I-Asides yebhola, uWood naye ulandela eminye imidlalo efana; umdyarho wamahashe, umanyano lombhoxo, ikhilikithi, ibaseball neNetball. Uyakuthanda ukuthatha inxaxheba ekudubuleni kunye ne tennis edibeneyo.
Nantsi eminye yemisebenzi kaChris Wood ngaphandle kwesandi. Ityala lemifanekiso: I-Twitter
Ukongeza kubomi bukaChris Wood, ungumntu onobuhlobo, onxibelelanayo kwaye osoloko elungele ukuzonwabisa. Kunomkhwa omncinci wokufumana ngokungqongqo, ucinge kwaye ungonwabi njengoko zininzi kakhulu izinto ekufuneka uzenzile.
Iinyani zeChris Wood zobuntwana kunye neeNqaku ze-Biology ze-Chris Ubomi Bentsapho
UChris Wood obonakala njengomnye wabantu abondla isapho lakhe uyakuvuyela ukuba nakho Yakha indlela yosapho lwayo eya kwinkululeko yezemali ebulela kwibhola ekhatywayo. Ngoku, nantsi ingcaciso eyongezelelweyo malunga namalungu osapho.
Chris Wood Tata: UGrant Wood, omncinci kakhulu owaziwayo ngaye nguyise kaChris. Unombulelo ngokukhuthaza unyana wakhe kunye nentombi yakhe ukuba bathathe inxaxheba kunye e-Onehunga, eyenzeka njengeqela labo lokuqala. Ngokungafaniyo nenkosikazi yakhe, kunokusasazwa iindaba ezimbalwa kuye.
UChris Wood Mum: Umhle uJulie Wood nguChris 'Mum. Ngokungafaniyo nomyeni wakhe, akenzanga nzame zokuthintela imithombo yeendaba. Apha ngezantsi kukho ifoto kaJulie entle kunye nonyana wakhe uChris njengoko bobabini babekho kumhla we-ANZAC apho babhiyozela umkhuluwa kaChris.
Dibana noJulie Wood- Umama kaChris Wood. Ityala lemifanekiso: I-Twitter
UChris Wood Dadewethu: Ngoku makhe ndikuxelele okungakumbi ngoChelsey onguDade kaChris Wood odlala ibhola njengaye. UChelsey imele ilizwe lakhe, i-New Zealand njenge-20s ngexesha leNdebe yeHlabathi yeBhola yabasetyhini ye-2008 ye-U20 eChile. UChelsey wayeyinxalenye yeNdebe yeHlabathi yeBhola ekhatywayo ye-2010 U20 yabaseJamani. Ukudlala i-Under-20 kunyaka we-2008 ngokuthetha kuthetha ukuba mdala kunomntakwabo.
Ubusazi?… UChelsey eneminyaka eyi-4 waqala ukudlala ibhola kunye nomntakwabo. Eli yayilixesha lokuba bobabini bangaqali ukudlala kwizifundo zabo. Ukusukela kwiminyaka yobudala be-4 ukuya kwi-12, uChris Wood wadlala kumaqela afanayo kunye nodadewabo omdala oboniswe ngezantsi.
UChris Wood Dade nomntakwabo. Ityala kwi-Twitter
UChris Wood Makhulu: Phakathi kogogo bakhe, uChris Wood wayekufutshane nomnye wabazukulwana bakhe ongafikiyo kodwa ongazange alibale. Apha ngezantsi kukho ifoto kaMakhulu wakhe awayemthanda kakhulu. Khumbula: Umzukulwana kaWood wayelijoni elidla umhlala phantsi ngaphambi kokuba adlulele.
Dibana noWood's Granddad owayeyindoda yasemkhosini ngaphambi kokuba adlule. Ityala kwi-Twitter
Iinyani zeChris Wood zobuntwana kunye neeNqaku ze-Biology ze-Chris yokuPhila
"Ibilulunga ukuba neli rhamncwa !! Phupha imoto, thanda!" Lawo ibingamazwi kaChris Wood njengoko ethandisa imoto yakhe, i-feat enika ukuqonda okungcono kwendlela yakhe yokuphila.
Indlela imbonakalo kaChris Wood Indlela yokuphila ejongeka ngayo. Ityala kwi-Twitter.
Ngeenkuni, dUkuhlala phakathi kokusebenziseka kwinqanaba lolonwabo kunye nokonwaba kwiphimbo alusisi khetho olunzima. Uyakuthanda ukuchitha iimali zakhe zebhola kwizinto azithandayo.
Iinyani zeChris Wood zobuntwana kunye neeNqaku ze-Biology ze-Chris Inyaniso engekho
Ubusazi?… UChris Wood lelinye lawona magama ahlonelwayo ukuza kuthi ga ngoku Ibhola ekhatywayo yaseNew Zealand ichaphazelekayo. Umphambili uhlonitshwe kangangokuba wonyulwa njengelungu lombutho webhodi yombutho wabahambi beNew Zealand.
Iintshatsheli zeBhola ekhatywayo: Yintoni enye oyilindeleyo? Udadewabo kaChris Wood kunye nenkosikazi yakhe bonke bangabadlali bebhola abaziingcali. Imibingelelo eyenziwa ngudade wabo kunye nemizabalazo yakhe eyintombazana awayethandana nayo uLinnett iye yenza ukuba uWood abe ngummeli ozinikeleyo weemeko ezingcono kumdlalo wabasetyhini. "Ayikuko nokuba nentombazana edlala ibhola okanye udade odlala ibhola, imalunga nokwenza okulungileyo. " Chris Wood waye waxelela uMgcini.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu leChris Wood ebuntwaneni kunye neNqaku leMbali yeBlog yeNqaku. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
I-Burnley yeDayari yeBhola
I-Harry Kewell Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts